2020 Myanmar Movie Trailer (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled? | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
2020 Myanmar Movie Trailer (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled?
2020 Myanmar Movie Trailer (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled?·
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ထောင်တွင်၊ သခင်ယေရှုက သူ၏ နောက်လိုက်များကို ကတိပြုခဲ့သည်၊ "သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။ ငါသည် သွား၍ သင်တို့ နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်" (ယော ၁၄:၂-၃)။ ဤအရာကြောင့်၊ ယုံကြည်သူ မျိုးဆက်များသည် သခင့်ကတိတော် ပြည့်စုံခြင်းအတွက် စွဲလမ်းစွာ မျှော်လင့်ပြီး ဆုတောင်းကြသည်။ ပြီးလျှင် သခင် ကြွလာသည့်အခါ၊ သူတို့သည် သခင့်ကို ဆုံတွေ့ရန်နှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခံရကြရန်အလို့ငှာ မျှော်လင့်ပြီး၊ ဆုတောင်းကြလေသည်။
ဤအကြောင်းအရာသည် ယခု ရုပ်ရှင်၏ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ ချန်ရှန့်ကွမ်းအကြောင်းကိုလည်း ထင်ဟပ်သည်။ သူသည် စိတ်အားထက်သန်သော ရှာဖွေသူ၊ ဧဝံဂေလိဝေငှပြီး၊ သခင်၏ ကြွလာခြင်းကို ကြိုဆိုရန်အလို့ငှာ သခင့်ကို သက်သေခံသူဖြစ်သည်။ သူသည် ကျောင်းတွင် သူ၏ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရပြီး၊ သူ့မိသားစုဝင်တို့ထံမှ နားလည်မှုကို မရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ သူ့စိတ်နှလုံးထဲရှိ မျှော်လင့်ချက်ကို သူ လုံးဝ အရှုံးမပေးခဲ့ပေ။ တစ်နေ့ စုဝေးစဉ်တွင်၊ ချန်ရှန့်ကွမ်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ အံ့ဖွယ် အုပ်စိုးမှုနှင့် စီမံမှုများအောက်တွင်၊ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကျောက်ကျိမင်နှင့် သူ ကြုံဆုံရသည်။ သခင်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းအတွက် မျှော်လင့် ဆုတောင်းရာ၌ သူ၏ နှစ်များစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော အယူအဆများနှင့် စိတ်ကူးများကို ကျောက်၏ မိတ်သဟာယက ဖြေရှင်းပေးလေသည်။ ထောင်က ထွက်ပြီးနောက်တွင်၊ ချန်ရှန့်ကွမ်းသည် တရားဟောဆရာ နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တို့အပေါ် သူတို့၏ မိတ်သဟာယမှတစ်ဆင့်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ချီဆောင်ခံရခြင်းသည် မည်သို့ဖြစ်သည်၊ နိုင်ငံတော်သည် အမှန်တကယ် မြေကြီးပေါ်မှာလော၊ ကောင်းကင်မှာလောဆိုသည်အပြင်၊ သခင်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို လူတို့ မည်သို့ ကြိုဆိုသင့်သည်တို့ကို နောက်ဆုံးတွင် ချန်ရှန့်ကွမ်း နားလည်သဘောပေါက်လေသည်။